दिनै हलुका उफ्रिनुहोस्, हड्डी बलियो बन्छ
पुस २७, २०७३ बुधवार २१:४५:४७ प्रकाशित
एजेन्सी– शरीर स्वस्थ राख्न हामी नियमित व्यायाम गर्छौ, दौडन्छौँ, हिँड्छौँ। तर एउटा अध्ययनले दैनिक कम्तीमा दुई मिनेटसम्म हलुका उफ्रँदा हड्डी बलियो बन्ने र भाँचिने खतरा कम हुने देखाएको छ। उफ्रनुलाई व्यायामका रुपमा नलिइए पनि नियमितको हल्का उफ्राइले बृद्धबद्धाको हिप भाँचिनबाट जोगाउने अनुसन्धानकर्ताले दाबी गरेका छन्। अध्ययनका अनुसार दिनमा दुई मिनेट मात्र उफ्रिने अभ्यास गर्दा हिपको हड्डी बलियो बन्छ र टुटफुट हुने खतरा टर्छ। यस्तो व्यायायमले एक वर्षमा हड्डी कसिलो र बलियो हुने अनुसन्धानले देखाएको हो।
'हिप हप’ नाम दिइएको उक्त अध्ययनमा सहभागीले खट्टा उचालेर बुरुक्क–बुरुक्क उफ्रिनु पर्दथ्यवो। उफ्राइपछिको सटी स्क्यान रिपोर्टमा उनीहरुको हड्डीबारे अध्ययन गरिएको थियो। लोगबोरग युनिभर्सिटीको नेसनल सेन्टर फर स्पोर्टस एन्ड एक्सरसाइज मेडिसियनमा अनुसन्धान गरेकी डा. सारा एलिसनले भनिन्, 'प्रौढहरुको हड्डी भाँचिने मुख्य स्वास्थ्य चासो हो। यसबाट आर्थिक र सामाजिक मूल्य धेरैले चुकाएका छन्। त्यसैले यो अध्ययन उपयोगी हुनसक्छ।’
उनले थपिन्, 'हामीलाई थाहा छ व्यायामले हड्डीको शक्तिलाई सुधार गर्न सक्छ र तसर्थ घरमा सजिलै र छिटो गर्न सकिने व्यायामलाई हामीले रोजेका हौँ।’
हड्डीको सिटी स्क्यानको निरीक्षण गरेका डा. विनस्टोन रेनी भन्छन्, 'दैनिक उफ्राइपछि हड्डीको नक्शाले हड्डीमा स्पष्ट परिवर्तन आएको देखाएको छ।’ कुनै पनि व्यायाम विस्तारै गर्नु महत्वपूर्ण हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्। त्यस्तै उफ्रँदा लड्न सक्नेतर्फ भने सचेत रहन उनीहरुले सुझाएका छन्।